केटी जिस्क्याएको विषयमा छलफल गर्न लाग्दा प्रहरी चौकीमै झडप : RajdhaniDaily.com
Homeप्रदेशकेटी जिस्क्याएको विषयमा छलफल गर्न लाग्दा प्रहरी चौकीमै झडप
बैतडी । बैतडीको एक प्रहरी चौकीमाबुधबार झडप भएको छ । जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिकावडा न. ५ स्थित बलारामा रहेको प्रहरी चौकीमा झडप भएको हो । स्थानीय युवाहरुको दुई समूह बिच प्रहरी चौकीमा झडप हुँदा पञ्चेश्वरका ३० बर्षीय लोकेन्द्र चन्द घाइते भएको बैतडीका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायव उपरीक्षक नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
घाइतेको बैतडीमा उपचार हुन नसक्दा धनगढीमा रहेको माया मेट्रो अस्पतालमा रेफर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । घाइते चन्दको टाउको घाँटी, ढाडमा चोट रहेको छ ।
गणमेश्वर मन्दिरमा लागेको मेलामा महिलालाई जिस्कायाएको निहुँमा दुई समूहबिच झडप भएपछि छलफलमा लागि प्रहरी चौकीमा बोलाएका बेला पुनःचौकीमै झडप भएको बताईएको छ ।
प्रहरी चौकीमा झडप गर्ने मध्ये सोधपुछका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक अधिकारीले बताए । अघिल्लो दिन मेलामा झडप गरेका दुई समूहलाई छलफलका लागि चौकीमा बोलाएका बेला चौकीमै झडप भएको उनले बताए । अहिले झडपमा संलग्नलाई सोधपुछका लागी जिल्ला बोलाएको डिएसपी अधिकारीले बताए ।
घटनाको बिषयमा अनुसन्धान भइरहेको र दोषी माथि कानुन अनुसार कारवाही हुने अधिकारीको भनाई छ । झडपका क्रममा प्रहरी चौकीमा पनि तोडफोड भएको र सामान्य क्षतीभएको छ ।
इलाम । ‘कृषिबाट अनुदान पाउनेलाई अनुदान पाएको थाहा हुन्छ कि हुँदैन ? यो प्रश्न हो जिल्ला समन्वय समिति इलामका सदस्य पूर्णबहादुर बस्नेतको । कृषि...
कृषि अनुदानको समीक्षा जरुरी
कृषि क्षेत्रको उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि सरकारले बर्सेनि कृषि अनुदानस्वरूप अर्बांै बजेट खर्च गरिरहे पनि सोचेअनुसार उपलब्धि हात लाग्न सकेको छैन । सरकारले कृषिलक्षित यस्ता...
डाका मुद्दाका मुख्य अभियुक्त कारागार चलान
प्रदेश १ मा २ जना डिस्चार्ज हुँदा १ सय २३ संक्रमित थपिए
ललितलाई सहयोग गर्ने क्यानको प्रतिबद्धता
दाङमा २८ वर्षिय युवाको मृत्यु, १७ देखि २५ गतेसम्म लकडाउन